Waxaa maalimihii aanu soo dhaafnay shirweyne isugu yimid waxgaradka, aqoonyahnaka culimada, haweenka iyo dhalinyarada beelaha habargidir (madarkicis iyo Maxamuud) Hiraab ee deggan magaalo madaxda Denmark ee Copenhagen iyo nawaaxigeeda. Sihirwaynahaani wuxuu uu ka dhashey ama uu dabasocdey shirar hore wadatashi iyo ra.yi kal qaadasho ah oo ay hore u yeesheen qaybaha kala duwan ee beelweynta habargidir.
Shirweynhaan waxaa si weyn loogu soo bandhigay looguna lafaguray dhibaatooyinka ay ku hayaan guud ahaan ummada soomaaliyeed gaar ahaan maatada iyo caruurta deggan koonfurta Soomaaliya ciidamada Tigreega iyo dabadhilifyada la socda oo ay soo hogaamiyeen qaar ay dadnimadoodu biday in ay madiidin u noqdaan si sandareerto u helaan qaarkoodna ay u geystaan xasuuq qabiili ah, oo loola jeedeo dad gaara kuwaas oo ah dadka degan gobolada dhexe iyo koonfurta soomaaliya.
Fikrado iyo doodo badan ka dib waxaa la isla gartey lana go�aansaday in si aan kala harlahayn hagarla,aana ah looga hortago la isagana caabiyo Tigreega iyo dabadhilifyada madiinka u ah ee duulaanka ku ah ummadda deggan gobollada dhexe iyo koonfurta Soomaaliya ayidoo la garabsanayo beelaha kale ee soomaaliyeed ee ay waxyeeladu ka soo gaartay ama ay ka haysato duulaankaan xaqdarada ah ee ay tikreega iyo dabadhilifyadeedu ku soo qaadeen degaanka soomalida guud ahaan gaar ahaana degaanada aan kor ku xusnay.
Dood iyo falanqayn kabacdi waxaay beelweynta habargidir (madrkicis iyo maxamuud hiraab) soo saareen qodobadaan soosocda.
1. Beesha Habargidir oo ah lafdhabarka halgan kasta ee umadda soomaaliyeed la gasho cadawga kala duwan ee umadda Soomaaliyeed, ayay beeshu go'aan ku gaartay in ay sii xoojiyaan kor u qaadida halganka xoreynta Soomaaliya oo dhan, islamarkaana ay la shaqeeyaan dhamaan cid kasta oo isku taagta midnimada iyo xoreynta umadda Soomaaliyeed.
2. Beesha Habargidir way ka dhiidhinaysaa xasuuqa lagu hayo umadda soomaliyeed meel kasta oo ay joogto, iyadoo xasuuqaan uu qarniyaal ku socday qaybo ka mida umadda soomaaliyeed.
3. Waxaan ugu baaqaynaa umadda Soomaaliyeed inay iska difaacaan cadawga soo jiraanka iyo dabadhilifyada gardarada ku haya dhawrtaana sharaftooda iyo midnimdooda kana digtoonaadaan dhagaraha cadawgu u maleegayo. Guushana waxaa helaya xaq u dirirka iyo dadka dhulka iska leh.
4. Beeshu waxay umadda soomaaliyeed u Sheegaysaa in Tikree iyo dabadhilifyada lasocdaa aysan soo kordhinaynin hormar iyo nolol ee waxa laga dhaxlayaa ay tahay bur bur iyo in laysku diro iyaga dhexdooda.
5. Tikreega iyo kaba qaadyada lasocdaahi taariikh madaw ayay umadda Soomaaliyeed ku yeelandoonaan, marnabana kuma guulaysan doonaan hadafkooda gurracan ee wax burburinta iyo xasuuqa ah dadka soomaliyeedna way xorreyn doonaan dhulkooda.
6. Beeshu Waxay aaminsantahay in la gaadhay xiligii Soomaali midoobilahayd gumaystahana gabalkiisu dhacay, lana gaadhay xiligii laga guulaysanlahaa.
7. Hababa waxaanu ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay taageeraan walaalahooda dagaalka kula jira cadawga umadda Soomaaliyeed islamarkaana maskax, maal iyo muruqba ka qayb qaataan. Maantay waxakaliya ee noo banaani waa in aan ku dhimano wadada xaqa ah.
8. Cadawgu wuxuu qorsheynayaa inuu xasuuq ba'an u geyso umadda soomaalyeed gaar ahaan meelaha laga diidan yahay, hadaba ummadda waxaan ugu baaqaynaa inay ku jihaadaan oo iska celiyaan duliga lala maagan yahay. Waxaan ugu baaqaynaa beelaha Soomaaliyeed ee beenta loo sheegayo inay walaalohood garab istaagaan dagaalkana la galaan.
9. Ugu danbayn Beeshu waxay taageersatahay cid kasta oo u gargaarta Kitaabka Allaah doonaysana
La xiriir: Mahad Khalif mahadkh@hotmail.com